220kV polymer mheni inosunga
220kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Iyo Zinc oxide Type Surge Arrester ndiyo ichangoburwa yepamusoro- － voltage dziviriro yekuparadzira tambo uye magetsi chiteshi chishandiso. Yakabatanidzwa ne zinc oxide uye imwe simbi oxide seyakadzika resistor disc, iyo volt-ampere hunhu uye kuburikidza-ikozvino kugona kweye resistor discare yakagadziriswa zvakanyanya zvichienzaniswa neyakajairika SiC mhando yekuwedzera musungwa. Pasi pemazita ekushandisa magetsi, iyo yazvino kuburikidza neyekuwedzera inosunga iri onl ...
110kV polymer mheni inosunga chiteshi mhando
110kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Iyo Zinc oxide Type Surge Arrester ndiyo ichangoburwa yepamusoro- － voltage dziviriro yekuparadzira tambo uye magetsi chiteshi chishandiso. Yakabatanidzwa ne zinc oxide uye imwe simbi oxide seyakadzika resistor disc, iyo volt-ampere hunhu uye kuburikidza-ikozvino kugona kweye resistor discare yakagadziriswa zvakanyanya zvichienzaniswa neyakajairika SiC mhando yekuwedzera musungwa. Pasi pemazita ekushandisa magetsi, iyo yazvino kuburikidza neyekuwedzera inosunga iri onl ...
110kV polymer mheni inosunga
66kV polymer mheni inosunga chiteshi mhando
66kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Iyo Zinc oxide Type Surge Arrester ndiyo ichangoburwa yepamusoro pa － voltage dziviriro yekuparadzira tambo uye magetsi chiteshi chishandiso. Yakabatanidzwa ne zinc oxide uye imwe simbi oxide seyakadzika resistor disc, iyo volt-ampere hunhu uye kuburikidza-ikozvino kugona kweye resistor discare yakagadziriswa zvakanyanya zvichienzaniswa neyakajairika SiC mhando yekuwedzera musungwa. Pasi pemazita ekushandisa voltage, iyo yazvino kuburikidza neyekuwedzera inosunga ndeye chete ...
66kV polymer mheni inosunga
35kV polymer mheni inosunga
35kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Iyo Zinc oxide Type Surge Arrester ndiyo ichangoburwa yepamusoro- － voltage mudziviriri wekuparadzira tambo uye magetsi chiteshi chishandiso. Yakabatanidzwa ne zinc oxide uye imwe simbi oxide seyakadzika resistor disc, iyo volt-ampere hunhu uye kuburikidza-ikozvino kugona kweye resistor discare yakagadziriswa zvakanyanya zvichienzaniswa neyakajairika SiC mhando yekuwedzera musungwa. Pasi pemazita ekushandisa voltage, iyo yazvino kuburikidza neyekuwedzera inosunga ndeye chete ...
10kV polymer mheni inosunga
10kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Iyo Zinc oxide Type Surge Arrester ndiyo ichangoburwa yepamusoro pa － voltage dziviriro yekuparadzira tambo uye magetsi chiteshi chishandiso. Yakabatanidzwa ne zinc oxide uye imwe simbi oxide seyakadzika resistor disc, iyo volt-ampere hunhu uye kuburikidza-ikozvino kugona kweye resistor discare yakagadziriswa zvakanyanya zvichienzaniswa neyakajairika SiC mhando yekuwedzera musungwa. Pasi pemazita ekushandisa voltage, iyo yazvino kuburikidza neyekusungwa inosunga iri ...
6kV polymer mheni inosunga
6kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Iyo Zinc oxide Type Surge Arrester ndiyo ichangoburwa yepamusoro pa － voltage mudziviriri wekuparadzira mutsetse uye chiteshi chemagetsi chiteshi. Yakabatanidzwa ne zinc oxide uye imwe simbi oxide seyakadzika resistor disc, iyo volt-ampere hunhu uye kuburikidza-ikozvino kugona kweye resistor discare yakagadziriswa zvakanyanya zvichienzaniswa neyakajairika SiC mhando yekuwedzera musungwa. Pasi pemazita ekushandisa voltage, iyo yazvino kuburikidza neyekuwedzera inosunga ndeye chete ...
3kV polymer mheni inosunga
3kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Iyo Zinc oxide Type Surge Arrester ndiyo yazvino yepamusoro yepamusoro － voltage dziviriro yekuparadzira tambo uye magetsi chiteshi chishandiso. Yakabatanidzwa ne zinc oxide uye imwe simbi oxide seyakadzika resistor disc, iyo volt-ampere hunhu uye kuburikidza-ikozvino kugona kweye resistor discare yakagadziriswa zvakanyanya zvichienzaniswa neyakajairika SiC mhando yekuwedzera musungwa. Pasi pemazita ekushandisa magetsi, iyo yazvino kuburikidza neyekuwedzera inosunga inongova ...
General "K" uye "T" mhando fuse zvinongedzo / zvinhu zvakapatsanurwa kuita "KB, KU, KS" sub-mhando fuse zvinongedzo / zvinhu izvo zvinoreva kune yakajairika mhando, yepasirese mhando uye sikuruwa mhando paIEC-282 yakajairwa. Iwo anoshanda kudonhedza-kunze fuse cutout ine 11-36kV. 1.Modheru modhi ine bhatani: rakagadzirwa ne "K" mhando fuse chinongedzo ne 6-8 yekunyungudika kumhanya uye "T" mhando ine 10-13 kusungunuka kumhanya Iwo anoshandiswa zvakanyanya kudonhedza fuse cutout. 2.Mhando yemhando w ...
donhwe fiyuzi YK4 akateedzana
General Fuse Cutout imhando yekunze yepamusoro voltage yemugove wedhiraivhu kana mitsara yekuparadzira uye inonyanya kushandiswa kuchengetedza maTransformer kana mitsara kurwisa kukanganisa kunosimudzwa nepfupi redunhu, kuwandisa uye switching yazvino. Iyo yekudonha-kunze fiyuzi yekucheka inoumbwa neinodzivirira rutsigiro uye fiyuzi inotakura, zvimisikidzo zvinofambidzana izvo zvakagadziriswa pamativi maviri e insulator rutsigiro uye inofambisa kubatana yakaiswa pamicheto miviri yeiyo fuse inotakura. Iyo yemukati yeiyo fuse inotakura ndiyo yekudzimisa ...
donhwe fiyuzi YK3 akateedzana